The Hunt (2012) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Alexandra Rapaport, Anne Louise Hassing, Annika Wedderkopp, Lars Ranthe, Lasse Fogelstrøm, Mads Mikkelsen, Sebastian Bull Sarning, Steen Ordell Guldbrandsen, Susse Wold, Thomas Bo Larsen
imdb 8.3 အထိရထားတဲ့ Hannibal မငျးသားကွီး Mads Mikkelsen ရဲ့ 2012 က ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ. ဇာတျလမျးလေးကတော့ ကြောငျးဆရာဖွဈတဲ့ Lucas ဟာ မူလတနျးကြောငျးသူလေးကို လိငျပိုငျးနှောကျယှကျမူ့လုပျပါတယျဆိုပီး စှပျစှဲခကျြတှကေို ဖွရှေငျးဖို့ဖွဈလာတဲ့အခါ မူလတနျးကြောငျးသူလေးက ဘယျလိုထှကျဆိုလာမလဲ ? တကယျပဲ လိငျပိုငျးနှောကျယှကျမူ့တှဖွေဈနတောလား ? ကလေးမလေးကပဲလိမျနတောလား ? စိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရမဲ့ Drama ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ
imdb 8.3 အထိရထားတဲ့ Hannibal မင်းသားကြီး Mads Mikkelsen ရဲ့ 2012 က ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်. ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကျောင်းဆရာဖြစ်တဲ့ Lucas ဟာ မူလတန်းကျောင်းသူလေးကို လိင်ပိုင်းနှောက်ယှက်မူ့လုပ်ပါတယ်ဆိုပီး စွပ်စွဲချက်တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ မူလတန်းကျောင်းသူလေးက ဘယ်လိုထွက်ဆိုလာမလဲ ? တကယ်ပဲ လိင်ပိုင်းနှောက်ယှက်မူ့တွေဖြစ်နေတာလား ? ကလေးမလေးကပဲလိမ်နေတာလား ? စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရမဲ့ Drama ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်
Annika Appelin Peter Hingebjerg Thomas Vinterberg
Alexandra Rapaport Anne Louise Hassing Annika Wedderkopp Lars Ranthe Lasse Fogelstrøm Mads Mikkelsen Sebastian Bull Sarning Steen Ordell Guldbrandsen Susse Wold Thomas Bo Larsen
Alexandra Rapaport Allan Wibor Christensen Anne Louise Hassing Annika Wedderkopp Birgit Petersen Bjarne Henriksen Daniel Engstrup Frank Rubæk Hana Shuan Heidi Gross Jacob Højlev Jørgensen Josefine Gråbøl Jytte Kvinesdal Karina Fogh Holmkjær Katrine Brygmann Kim Westi Rasmussen Lars Ranthe Lasse Fogelstrøm Mads Mikkelsen Marie Aktor Mie Ravn Nielsen Mona C. Soliman Nicolai Dahl Hamilton Nina Christrup Ole Dupont Øyvind Hagen-Traberg Rasmus Lind Rubin Rikke Bergmann Sebastian Bull Sarning Søren Rønholt Steen Ordell Guldbrandsen Susse Wold Thomas Bo Larsen Thomas Ravn Troels Thorsen
Option 1 storage.msubmovie.com 542 MB SD (480p)
Option2server.mfile.cloud 542 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 542 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 542 MB SD (480p)